Maxay Tahay Sababta Adiga Iyo Macmiilkaagu U Dhaqaaqaan Sida Lamaane Is Qaba 2022 | Martech Zone
Talaado, Febraayo 8, 2022 Talaado, Febraayo 8, 2022 Gregg Ames
Haysashada macaamiishu waxay u fiican tahay ganacsiga. Kobcinta macaamiisha waa hab ka sahlan soo jiidashada kuwa cusub, iyo Macaamiisha qanacsan waxay aad ugu dhowdahay inay iibsadaan soo noqnoqda. Joogteynta xiriirka macaamiisha adag kaliya kama faa'ideyso xariiqda hoose ee ururkaaga, laakiin sidoo kale waxay meesha ka saaraysaa qaar ka mid ah saameynta laga dareemay sharciyada cusub ee aruurinta xogta sida Mamnuucidda Google ee ku soo fool leh cookies-ka qolo saddexaad.
Kor u kaca 5% ee xajinta macaamiisha waxay la xidhiidhaa ugu yaraan 25% korodhka faa'iidada)
AnnexCloud, 21 La yaab leh Tirakoobka Haynta Macmiilka ee 2021
Haysashada macaamiisha, calaamaduhu waxay sii wadi karaan horumarinta xogta qiimaha leh ee qaybta koowaad, (oo ku saleysan sida macaamiishooda ay ula falgalaan oo ay u isticmaalaan alaabtooda) taas oo markaa loo isticmaali karo in lagu shakhsiyeeyo isdhexgalka mustaqbalka ee macaamiisha jira iyo rajada. Sababahaan waa sababta, 2022, suuqleydu waa inay diirada saaraan ilaalinta iyo kobcinta xiriirka macaamiisha jira, oo la mid ah sida aad ula yeelan lahayd xaaskaaga.
Inaad xiriir la leedahay waxay qaadataa taxadar iyo taxadar - ma tixgalin lamaanahaaga isla marka uu xiriirku bilowdo. Iibsashada xaaskaaga shokolaatada ama ubaxyada ay jecel yihiin waxay la mid tahay inay u soo diraan iimaylka shakhsi ahaaneed ee macaamilka - waxay ku tusinaysaa inaad danaynayso iyaga iyo xidhiidhka aad wadaagtaan labadiinaba. Dadaal badan iyo waqti aad diyaar u tahay inaad gelisay dhisidda xiriirka, labada dhinacba way ka faa'iideysan karaan.
Talooyin ku saabsan Xajinta Macaamiishaada
Sii wad inaad isbartaan. Cilaaqaadku waxa ay ku dhisan yihiin asaas adag, sidaa awgeed, samaynta iyo ilaalinta aragtida wanaagsan waxay noqon kartaa mid aad muhiim u ah.
Dusha saaran - Abuuritaanka ololaha barbaarinta korka, halkaas oo aad furto khadadka isgaarsiinta tooska ah, waxay kaa caawineysaa in la aasaaso ganacsigaaga lammaane, ma aha oo kaliya iibiye macaamiishaada cusub. Khadkaan isgaarsiinta tooska ah wuxuu sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad noqoto mid degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo jawaabahaaga marka macaamilku kuu yimaado su'aal ama arrin, taas oo lagama maarmaan u ah dhisida kalsoonida. Waa inaad sidoo kale u isticmaashaa si aad u soo gasho oo aad u hesho jawaab celin kasta oo ay qabaan si aad si fiican ugu wanaajiso khibradooda. Ka dib oo dhan, isgaarsiinta ayaa fure u ah cilaaqaadka.
Gaadiidka Suuqgeynta - Ka faa'iidayso automation marketing. Automation-ka suuqgeyntu kaliya ma fududeeyo habka barbaarinta, waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad ururiso oo aad ka faa'iidaysato xogta qiimaha leh ee ku saabsan macaamiishaada. Suuqgeeyayaashu waxay ka faa'iidaysan karaan fikrado ay ku jiraan alaabada ama adeegyada ay xiisayn karaan, sida ay u isticmaalayaan alaabtaada ama adeegyadaada, ama haddii ay baadheen mareegahaaga. Xogtan ayaa u oggolaanaysa suuq-geeyayaasha inay aqoonsadaan macaamiisha badeecadaha ama adeegyada waa in isticmaal, siinaya fursad ay kaga cadhaysiiyaan macaamiishooda iyagoo daboolaya baahiyahooda. Sida aad u fiirsato lammaanahaaga si aad u odoroso waxa ay rabaan ama u baahan karaan, sidaas oo kale waa in loo sameeyaa macaamiishaada, maadaama ay albaabka u furayso faa'iido dheeraad ah.
Suuqgeynta SMS – Tag mobilada oo wata suuqgeyn SMS ah. Waxa kaliya oo macno samaynaysa in suuq-geynta SMS-ku uu kor u kacayo iyada oo baahsanaanta taleefannada casriga ah ee maanta. Suuqgeynta mobilada ayaa siinaysa shirkada dhuumo toos ah oo si toos ah gacanta macmiilka u gala, waxayna ka dhigan tahay hab wax ku ool ah oo loo gudbiyo macluumaadka muhiimka ah ee muhiimka ah. Fariimaha SMS-ku waxa ay ka koobnaan karaan heshiisyo xayaysiis ah, qoraalo mahadnaq ah, xogururin, ogaysiisyo iyo wax ka badan, dhammaan si loo ilaaliyo macaamilka iyo farxadda. Sida aad u hubiso xaaskaaga ama aad la wadaagto macluumaadka maalintaada SMS, waa inaad la wadaagtaa macluumaadka macaamiishaada sidoo kale, adigoo isticmaalaya kanaal hufan oo waxtar leh.
Noocyada u isticmaala tignoolajiyada si ay xidhiidh qoto dheer ula yeeshaan macaamiishooda, oo si joogto ah u bixiya qiimaha fariimaha gaarka ah, iyo ilaalinta khadadka isgaadhsiinta waxay dhisi doonaan xidhiidh macno leh macaamiishooda. Markasta oo ay sii xoogaysato iskaashiga labada dhinac, mid kastaaba wuu ka bixi karaa - sida xiriirka xaaskaaga.
Tags: ku dhaqaaqku dhaqmaan softwareAct-Onannexcloudxiriirka macaamiishahaynta macaamiishaxiriirka iibiyaha macaamiishasuuq-geynta suuqatikniyoolajiyadda suuqgeyntahalgankaiibiyaha martechmarketing mobiledusha saaranshakhsi ahaaneedsms suuq geyntafarriinta qoraalka suuqgeyntacookies saddexaad
Gregg Ames waa madaxa sarkaalka ganacsiga ee Act-On Software, goob suuq gayn korriin ah oo ku taal Portland, Oregon. Doorkiisa, wuxuu mas'uul ka yahay istiraatiijiyadda iibka suuqa ee Act-On. Gregg waxa uu aad u xiiseeyaa diyaarinta iyo keenista khibradaha macmiilka ee heersare ah ee ka farxiya isticmaaleha ugu dambeeya. Wuxuu keenaa in ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo ah ururada SaaS iyo MarTech, isagoo doorar sare ka soo qabtay Oracle, Kibo Commerce, Conversica, iyo Turning.
Gleam: Barnaamijyada Suuqgeynta loogu talagalay in lagu kobciyo ganacsigaaga